दशैंकाे टिका कुन दिशामा फर्केर टिका ग्रहण गर्नु उत्तम ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
दशैंकाे टिका कुन दिशामा फर्केर टिका ग्रहण गर्नु उत्तम ?
२०७८ असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ । घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान ८:१९ बजे विसर्जन गरिने साइत छ । विजयादशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनेका लागि बिहान १०:०२ बजेको साइत शुभ रहेको छ । टीका लगाउने मानिस पूर्वफर्कनुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसाद लगाउन सकिन्छ ।